6 Atụmatụ ịlanahụ okpomọkụ LIVE FROM TIME SQUARE!
emelitere ikpeazụ: Ka. 13 2019 | 2 min agụ
"Otu bụ owu kasị ama ọnụ."—Atọ Dog Night
Ahh ... okpomọkụ romance.
Ọ bụ oge maka ndị hụrụ. Ọ bụ stof nke uzuoku romance akwụkwọ akụkọ na igbe-ụlọ ọrụ suru fim na-mere nke. Mgbe kpokọtara ngwakọta nke na-ekpo ọkụ okpomọkụ, ogologo kpakpando, ehihie na abalị, na mellow ọnọdụ uche nwere ike tinye aka ụfọdụ mara mma "sizzling" onwu na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na mating idaha.
Ma, edemede abụghị otu n'ihi na onye ọ bụla.
O di nwute na ọ pụkwara-abụ a siri ike oge maka ndị na-enwe a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị "oké ọkọchị" ma ọ bụ ndị o yiri ka ịbụ keihuojoo ịhụnanya na.
A ọnwa ole na ole nke okpomọkụ nwere ike iyi ka Ẹkot nkịta afọ.
Ma, ebe a bụ ozi ọma: ọ na-adịghị na-.
Otu adịghị ga-abụ "ihe owu kasị ama ọgụgụ" ma ọ bụrụ na ị na-agụ na-aṅa ntị na ndị a na-adọ Atụmatụ.
6 Atụmatụ a na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ n'agbanyeghị gị ọnọdụ!
1. Kama agụta ụbọchị, gụọ ngọzi gị.
Nke ahụ dị mma. Ọ bụ ezie na ọ pụrụ ịbụ egwu na-tinyere na a cutie, na-aga RockSmith nwere ọtụtụ uru ịmakụ nakwa.
Ka anyị nyochaa ụfọdụ. Olee banyere eziokwu na i nwere ngụkọta nnwere onwe na-ahịa 'til i idebe? Iji esi nri mgbe ọnọdụ akụrisị ị? Iji na-agbaso nrọ gị na-enweghị nnyonye anya?
Iji selectively "ọdịmma onwe onye nanị".
2. -akpa na Onwe Gị. (Ohiri isi okwu ịnara).
Ị na-anwụ anwụ na-agbalị ọhụrụ ahụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ógbè gị na onye ọ bụla na-e "ihie" banyere? Ga-amasị gị indulge n'ike n'ike chocolate na Devid agụghị ndị gbara wine? Iji emebiwo na pampered? Gịnị mere echere onye ọzọ na-eme ememe ị?
Emeso onwe gị; adịghị aghọ aghụghọ ule onwe gị!
Na okwu nke Dr. Phil, "Mgbe ụfọdụ, anyị na-enye onwe anyị ihe kwesịrị anyị site n'aka ndị ọzọ."
3. Iji nke a "ala oge" maka onwe mmelite mma.
The ụzọ kasị mma na-adọta a oké nwunye bụ ịbụ otu. N'Ezie. Kama imere onwe gị ebere, ma ọ bụ na-eche site na ekwentị, na-agbalị na-na-na-n'ime egwuregwu nke ndụ. Mụta asụsụ ọhụrụ. Jikọọ mgbatị. Banye maka a na naa na klaasị. Ọ bụghị naanị na ndị a ga-jikoro dịkwuo gị uru na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ahịa, ọ ga-amụba gị ùgwù onwe onye. Echela maka echi!
Oké Nkume a ọhụrụ ịkpụ ntutu. Esi nri ụfọdụ ọhụrụ ntụziaka na kichin. Redecorate gị na mpe mpe akwa. Gbalịa karaoke na a Obodo mmanya.
Single-ah u bụ oké oge maka onwe-chọpụtara na uto.
5. Ịchụkwudo akwụkwọ ọgụgụ ụfọdụ.
M hụrụ n'anya na-agụ. Na ọtụtụ n'ime anyị nwere ike curling ruo a ezigbo akwụkwọ, nanị n'ihi na anyị ọtụtụ ọrụ—relational na N'ọrụ. Ebe ọ bụ na ị bụghị yiri ka a ga "curling elu" na onye now, ọ dị mfe na-eme ka oge na-aga. Ọ bụghị nanị na-agụ mụbaa gị ihe ọmụma isi; ọ nwere ike na aka gị mkparịta ụka nkà. Abụọ utu aha m ga-ike ikwu bụ:
"Ọ bụ nnọọ bụghị na n'ime Ị" na "ime ihe dị ka Lady, Eche echiche dị ka a Man. "
6. -Adịghị tụnyere ma ọ bụ mpi.
Na ezigbo enyi gị nwere enyi nwoke. Nwanne gị nwaanyị na-ịlụ di na nwunye.
Gị na-elekọta mmadụ na kalenda bụ jupụtara akwụkwọ ịkpọ òkù si folks bụ ndị yiri ka a ga-anụ ụtọ ndụ ka mma.
Now hoo n'ihi na ị, nri? Njọ. Na okwu nke Bruno Mars, "Ị na-ịtụnanya, dị nnọọ ka ndị na ị bụ. "Nọgidenụ na-ya n'uche.
Summer adịghị ga-abụ a bummer! Họrọ nwere àgwà ziri ezi, na anya otú kwesịrị ekwesị, na n'ime- udo, na ndị fọdụrụ ga-ada ebe.
Tupu ị mara ihe ọ na-, ị ga-amụta na-etinye "na-abụ abụ" na otu.
6 Bịara n'Ezi Oge Atụmatụ maka Ịlụ echeta!
Ụzọ Isi Nagide Mgbe a gbasaa
5 Ara (Ma, ezi) Ihe dị dịwara Ị Mkpa Ịmata!
Top Atụmatụ maka a Great Kiss Kedu Ele nnọọ zuru okè
© Copyright 2019 Ụbọchị My Pet. Mere na site 8celerate Studio